Khamrigii 5.0 ayaa yimid, iyadoo lagu taageerayo bandhigyo badan, Vulkan 1.1 iyo in ka badan | Laga soo bilaabo Linux
Shalay sii deynta nooc cusub ayaa lagu dhawaaqay iyo laanta xasilloon ee mashruuca by Kalsantv Official, oo ah softiweer bilaash ah oo hirgeliya istiraatiijiyad farsamo oo la mid ah Windows-ka ee jawiga UNIX (BSD, Linux). Khamrigu uma baahna nidaamka hawlgalka ee Windows inuu shaqeeyo mana aha emulator sida QEMU, tusaale ahaan, laakiin wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku socodsiiso codsiyada Windows-ka deegaan UNIX ah. Khamriga waxaa loogu talagalay jawiga UNIX waxaana loo heli karaa dhammaan qeybiyeyaasha waaweyn ee Linux: Ubuntu, Debian, Fedora, SUSE, Slackware, iyo kuwo kale.
Khamriga 5.0 waa nooca cusub ee mashruuca in wuxuu la yimaadaa taageero dheeraad ah hirgelinta, taas oo muujineysa ka mid noqoshada Vulkan 1.1, iyo sidoo kale nooca cusub waxay soo martay isugeyn ka badan 7,400 oo isbedel ah.
1 Wararka ugu muhiimsan ee Khamriga 5.0
2 Sidee loo rakibaa Khamriga 5.0?
Wararka ugu muhiimsan ee Khamriga 5.0
Qaabkan cusub ee Khamriga 5.0 waxaa lagu muujiyey taas astaamaha badankood ee loo isticmaalo Kernel32 waxaa loo wareejiyay KernelBase, ka dib isbeddelo ku yimid dhismaha Windows.
Sidoo kale taasi way taagan tahay awoodda isku darka 32-bit iyo 64-bit faylasha DLL ku jira buuga tusayaasha loo isticmaalo soo dejinta.
Riwaayad kale oo lagu daray oo taagan ayaa ah wanaajiyay taageerada ilaaliyaasha ciyaarta, kaas oo ay ku jiraan joystick mini (koofiyad shidan), isteerinka isteerinka, xawaaraha iyo bareega bareega.
Waxa weheliya rakibida iyo raritaanka wadayaasha qalabka Plug & Play loo baahan yahay iyo taageerida Linux joystick-kii hore ee loo isticmaali jiray kernels-ka Linux ka hor version 2.2 waa la joojiyay.
Dhinaca hagaajinta loogu talagalay Direct3D 8 iyo 9 waxay bixiyaan raadinta saxda ah ee meelaha wasakhda ah ee ka timaadda qaababka la soo raray.
Waxay yaraysay cabbirka meesha cinwaanka ee loo baahan yahay markii la rakibayo qaababka 3D ku cadaadiyey habka S3TC (halkii ay ka buuxin lahaayeen qaabab dhammaystiran waxay ku raran yihiin qaybo). Intaa waxaa sii dheer, isdhexgalka ID3D11Multithread ayaa lagu daray, la hirgeliyay si loo ilaaliyo qeybaha muhiimka ah ee codsiyada kaladuwan
Sidoo kale waxaa la xusay in darawalka loo yaqaan 'Vulkan graphic API' la cusbooneysiiyay nooca Vulkan ee cusub 1.1.126.
Dhinaca kale, waxaa la xusay in shaqooyin kala duwan oo shaqo loo wareejiyay waqti ka dib iyadoo la adeegsanayo shaqooyinka nidaamka waxqabadka sare si ay ula shaqeeyaan saacad, taas oo hoos u dhigtay dusha sare ee wareegga bixinta ee ciyaaro badan.
Taasna Waxaa lagu daray awooda isticmaalka qaabka loo yaqaan 'FS Ext4 case-insensitive'.
Intaa waxaa dheer, hagaajinta waxqabadka muujinta shay tiro badan ayaa lagu sameeyay sanduuqyada muujinta liiska ee ku shaqeeya qaabka LBS_NODATA.
Isbedelada kale ee lagu muujiyey xayeysiiska:
Lagu daray dhaqangelinta dhaqsaha badan ee SRW (Slim Reader / Writer) qufulka Linux, oo loo tarjumay Futex
Ku tiirsanaanta dibedda
Si loogu dhiso modules qaab PE ah, iskutallaab iskutallaab MinGW-w64 ayaa la isticmaalaa
Hirgelinta XAudio2 waxay u baahan tahay jiritaanka maktabadda FAudio
Maktabadda Inotify waxaa loo isticmaalaa in lagu raadsado isbeddelada faylasha ee nidaamka BSD
Si loo maareeyo waxyaabaha ka reeban barxadda ARM64, maktabadda Unwind ayaa loo baahan yahay
Halkii laga heli lahaa Video4Linux1, maktabadda Video4Linux2 ayaa hadda loo baahan yahay.
Taageero lagu daray la shaqeynta kormeerayaal fara badan iyo qaabab qaabeeyayaal ah, oo ay kujirto awooda si firfircoon u badalida goobaha
Sidee loo rakibaa Khamriga 5.0?
Si waa isticmaalayaasha Debian, Ubuntu, Linux Mint iyo noocyo kaladuwan haddii isticmaal nooc 64-bit ah nidaamka, waxaan awood u siineynaa dhismaha 32-bit qaab dhismeedka:
Hadda waxaan ku dari doonaa waxyaabaha soo socda nidaamka:
Kuwa isticmaala Debian, waa inay ku daraan keydka:
Waxaan ku darnaa bakhaarka, Ubuntu 19.10 iyo derivatives:
Ubuntu 18.04 iyo noocyo kala duwan:
Kadib waxaan ku cusbooneysiinnaa bakhaarada:
Tan ayaa sameysay, Waxaan sii wadaynaa inaan rakibno xirmooyinka lagama maarmaanka u ah Khamriga si habsami leh ugu socdo nidaamka:
para kiiska Fedora iyo waxyaabaha ka dhasha:
Ugu dambeyntiina waxaan ku rakibnay Khamri:
Arinta ah Arch Linux ama qayb kasta oo ku saleysan qaybinta 'Arch Linux' Waxaan ka soo dhejin karnaa noocyadan cusub bakhaaradiisa rasmiga ah ee qaybinta.
Amarka lagu rakibo waa:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Wine 5.0 waa halkaan, oo lagu taageerayo bandhigyo badan, Vulkan 1.1 iyo in ka badan
Qeexitaanka ODF 1.3 waxaa horay u ansixiyay OASIS